သံလွင်နဲ့ အုန်းဆီမှာ ဘယ်ဆီက ပိုကောင်းလဲ – For her myanmar
သံလွင်နဲ့ အုန်းဆီမှာ ဘယ်ဆီက ပိုကောင်းလဲ
Posted on April 8, 2019 Author Ei Mon	Comment(0)
မျက်စိရှေ့မြင်တာကို သုံးလိုက်တာပဲမလား 🤣
နိုင်ငံခြားမှာတော့ သံလွင်ဆီနဲ့ အုန်းဆီကို တန်ဖိုးထားပြီး သေချာသုံးကြတယ် ဆိုပေမဲ့ ကိုယ်တွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အုန်းဆီဆိုတာ ဆံပင်သန်ဖို့ ၊ သံလွင်ဆီ ဆိုတာ အကြောပြတ်ရာ ပျောက်ဖို့ ၊ ဝိတ်ကျဖို့ အဲ့ဒါလောက်ပဲ သိတာရယ် ။ ဒါဆိုရင် ဘယ်ဆီက နှလုံး ကျန်းမာရေးအတွက် ပိုကောင်းပြီး ဘယ်ဆီက ဆံသားကျန်းမာရေးအတွက် ပိုကောင်းတယ် ဆိုတာရယ် အာဟာရ အချိုးအစား နဲ့ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးရယ်ကို သေချာလေး နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရအောင်။
ကယ်လိုရီအရ ကြည့်မယ်ဆိုရင် သံလွင်ဆီရော အုန်းဆီမှာပါ ကယ်လိုရီပမာဏ အတူတူပါပဲ။ ကွာခြားတာဆိုလို့ ပြည့်ဝဆီပမာဏပဲ ရှိတယ်။ အုန်းဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်းမှာ ပြည့်ဝဆီ ၁၂ ဂရမ် ပါဝင်ပေမဲ့ သံလွင်ဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်းမှာတော့ ပြည့်ဝဆီ ၁ ဂရမ်ပဲ ပါဝင်ပါတယ်။ အမေရိကန်နှလုံးအဖွဲ့အစည်းရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ နေ့စဉ် အဆီစားသုံးမှု ပမာဏက ၂၅ ကနေ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်း ရှိသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဆီ ၂ မျိုးစလုံးမှာ ပြည့်ဝဆီက ၇ ရာခိုင်နှုန်းထက် မကျော်သင့်ပါဘူး။ အုန်းဆီက ခန္ဓာကိုယ် လိုအပ်တာထက် ပိုများတဲ့ ပြည့်ဝဆီကို ပေးစွမ်းပြီး သံလွင်ဆီမှာက ကောင်းမွန်တဲ့ အဆီတွေပိုပါပါတယ်။ ပြီးတော့ သံလွင်ဆီမှာက အန်တီအောက်ဆီဒန့်ဓာတ်တွေ ပိုကြွယ်ဝတာကြောင့် အရေပြားပျက်စီးခြင်း ၊ ကင်ဆာနဲ့ အခြားသောရောဂါတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Related Article>>>သံလွင်ဆီရဲ့မယုံနိုင်ဖွယ် အသုံးဝင်ပုံ
ကဲ….ဒါပြီးရင်တော့ သံလွင်ဆီနဲ့ အုန်းဆီတို့ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရအောင်။ အရင်ဆုံး အုန်းဆီအကြောင်း စပြောမယ်…
အုန်းဆီက ခြောက်သွေ့တဲ့ အရေပြားကို ချောမွေ့စေပါတယ်။ မျက်နှာ ၊ လက်နဲ့ ခြေထောက်ကို အုန်းဆီလိမ်းပေးမယ်ဆိုရင် ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးပြီး အသားအရေ စိုပြေစေပါတယ်။ မုတ်ဆိတ်ရိတ် ခရင်မ်အစား အုန်းဆီကို သုံးလို့ရသလို ဆံပင်အတွက် conditioner အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေး အဖြစ်လည်း သုံးလို့ ရပါတယ်။
သံလွင်ဆီကတော့ အုန်းဆီထက်ပိုပြီး ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးပါတယ်။ ဆံပင်အုံထူသူတွေ ၊ ဆံပင်ကောက်ထားသူတွေက အုန်းဆီထက်စာရင် သံလွင်ဆီကိုပိုပြီး သုံးသင့်ပါတယ်။ ဆံပင်ကို အခွေအလိပ်လေးတွေ ကောက်ထားသူတွေ အတွက်ကတော့ ခေါင်းလျှော်ပြီးတိုင်း သံလွင်ဆီကို serum အဖြစ် သုံးလို့ရပါတယ်။ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ခရင်မ်အဖြစ် သုံးလို့ရသလို ထိခိုက်ရှနာနဲ့ အနာသေးသေးလေးတွေ ပျောက်အောင်လည်း သံလွင်ဆီက ကူညီပေးပါတယ်။
Related article>>>အဆီပြန်တဲ့အသားအရေ (Oily skin) အတွက် skincare tips and tricks ပေါင်းချုပ်
အုန်းဆီနဲ့ သံလွင်ဆီ ၂ မျိုးလုံးမှာတော့ ကယ်လိုရီတွေနဲ့ ပြည့်ဝနေပါတယ်။ နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းတဲ့ဆီဆိုတာက နှလုံးရောဂါတွေကို အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ဆီကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒီလိုဆိုပေမဲ့ ရောဂါခံစားနေရသူ ဆိုရင်တော့ အဆီများတဲ့ အစားအစာတွေကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။ ဆီတစ်မျိုးချင်းစီကတော့ သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ ကောင်းကြတာချည်းပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်း ခိုင်ခိုင်လုံလုံ သက်သေပြဖို့ သုတေသနတွေလုပ်ပြီး ဆောင်ရွက်နေဆဲပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဘယ်ဆီကိုမဆို အလွန်အကျွံ အသုံးမပြုဘဲ ဆရာဝန်နဲ့ သေချာတိုင်ပင်ပြီး သုံးစွဲတာက ပိုကောင်းပါတယ်။
ယောင်းတို့အိမ်မှာရော သံလွင်ဆီနဲ့ အုန်းဆီ မှာ ဘယ်ဆီကို ပိုအသုံးများလဲ?
မကျြစိရှမွေ့ငျတာကို သုံးလိုကျတာပဲမလား 🤣
နိုငျငံခွားမှာတော့ သံလှငျဆီနဲ့ အုနျးဆီကို တနျဖိုးထားပွီး သခြောသုံးကွတယျ ဆိုပမေဲ့ ကိုယျတှေ မွနျမာနိုငျငံမှာတော့ အုနျးဆီဆိုတာ ဆံပငျသနျဖို့ ၊ သံလှငျဆီ ဆိုတာ အကွောပွတျရာ ပြောကျဖို့ ၊ ဝိတျကဖြို့ အဲ့ဒါလောကျပဲ သိတာရယျ ။ ဒါဆိုရငျ ဘယျဆီက နှလုံး ကနျြးမာရေးအတှကျ ပိုကောငျးပွီး ဘယျဆီက ဆံသားကနျြးမာရေးအတှကျ ပိုကောငျးတယျ ဆိုတာရယျ အာဟာရ အခြိုးအစား နဲ့ ကောငျးကြိုး ဆိုးကြိုးရယျကို သခြောလေး နှိုငျးယှဉျကွညျ့ရအောငျ။
ကယျလိုရီအရ ကွညျ့မယျဆိုရငျ သံလှငျဆီရော အုနျးဆီမှာပါ ကယျလိုရီပမာဏ အတူတူပါပဲ။ ကှာခွားတာဆိုလို့ ပွညျ့ဝဆီပမာဏပဲ ရှိတယျ။ အုနျးဆီ စားပှဲတငျဇှနျး ၁ ဇှနျးမှာ ပွညျ့ဝဆီ ၁၂ ဂရမျ ပါဝငျပမေဲ့ သံလှငျဆီ စားပှဲတငျဇှနျး ၁ ဇှနျးမှာတော့ ပွညျ့ဝဆီ ၁ ဂရမျပဲ ပါဝငျပါတယျ။ အမရေိကနျနှလုံးအဖှဲ့အစညျးရဲ့ ထုတျပွနျခကျြအရ နစေ့ဉျ အဆီစားသုံးမှု ပမာဏက ၂၅ ကနေ ၃၅ ရာခိုငျနှုနျး ရှိသငျ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အဆီ ၂ မြိုးစလုံးမှာ ပွညျ့ဝဆီက ၇ ရာခိုငျနှုနျးထကျ မကြျောသငျ့ပါဘူး။ အုနျးဆီက ခန်ဓာကိုယျ လိုအပျတာထကျ ပိုမြားတဲ့ ပွညျ့ဝဆီကို ပေးစှမျးပွီး သံလှငျဆီမှာက ကောငျးမှနျတဲ့ အဆီတှပေိုပါပါတယျ။ ပွီးတော့ သံလှငျဆီမှာက အနျတီအောကျဆီဒနျ့ဓာတျတှေ ပိုကွှယျဝတာကွောငျ့ အရပွေားပကျြစီးခွငျး ၊ ကငျဆာနဲ့ အခွားသောရောဂါတှကေို ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
Related Article>>>သံလှငျဆီရဲ့မယုံနိုငျဖှယျ အသုံးဝငျပုံ
ကဲ….ဒါပွီးရငျတော့ သံလှငျဆီနဲ့ အုနျးဆီတို့ရဲ့ အကြိုးကြေးဇူးတှကေို နှိုငျးယှဉျကွညျ့ရအောငျ။ အရငျဆုံး အုနျးဆီအကွောငျး စပွောမယျ…
အုနျးဆီက ခွောကျသှတေဲ့ အရပွေားကို ခြောမှစေ့ပေါတယျ။ မကျြနှာ ၊ လကျနဲ့ ခွထေောကျကို အုနျးဆီလိမျးပေးမယျဆိုရငျ ရဓောတျဖွညျ့ပေးပွီး အသားအရေ စိုပွစေပေါတယျ။ မုတျဆိတျရိတျ ခရငျမျအစား အုနျးဆီကို သုံးလို့ရသလို ဆံပငျအတှကျ conditioner အဖွဈ ဆောငျရှကျပေးပါတယျ။ မိတျကပျဖကျြဆေး အဖွဈလညျး သုံးလို့ ရပါတယျ။
သံလှငျဆီကတော့ အုနျးဆီထကျပိုပွီး ရဓောတျဖွညျ့ပေးပါတယျ။ ဆံပငျအုံထူသူတှေ ၊ ဆံပငျကောကျထားသူတှကေ အုနျးဆီထကျစာရငျ သံလှငျဆီကိုပိုပွီး သုံးသငျ့ပါတယျ။ ဆံပငျကို အခှအေလိပျလေးတှေ ကောကျထားသူတှေ အတှကျကတော့ ခေါငျးလြှျောပွီးတိုငျး သံလှငျဆီကို serum အဖွဈ သုံးလို့ရပါတယျ။ မုတျဆိတျရိတျခရငျမျအဖွဈ သုံးလို့ရသလို ထိခိုကျရှနာနဲ့ အနာသေးသေးလေးတှေ ပြောကျအောငျလညျး သံလှငျဆီက ကူညီပေးပါတယျ။
Related article>>>အဆီပွနျတဲ့အသားအရေ (Oily skin) အတှကျ skincare tips and tricks ပေါငျးခြုပျ
အုနျးဆီနဲ့ သံလှငျဆီ ၂ မြိုးလုံးမှာတော့ ကယျလိုရီတှနေဲ့ ပွညျ့ဝနပေါတယျ။ နှလုံးကနျြးမာရေးအတှကျ ကောငျးတဲ့ဆီဆိုတာက နှလုံးရောဂါတှကေို အတိုငျးအတာ တဈခုထိ ကာကှယျပေးနိုငျတဲ့ဆီကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒီလိုဆိုပမေဲ့ ရောဂါခံစားနရေသူ ဆိုရငျတော့ အဆီမြားတဲ့ အစားအစာတှကေို ရှောငျသငျ့ပါတယျ။ ဆီတဈမြိုးခငျြးစီကတော့ သူ့နညျးသူ့ဟနျနဲ့ ကောငျးကွတာခညျြးပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ တကယျတမျး ခိုငျခိုငျလုံလုံ သကျသပွေဖို့ သုတသေနတှလေုပျပွီး ဆောငျရှကျနဆေဲပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ ဘယျဆီကိုမဆို အလှနျအကြှံ အသုံးမပွုဘဲ ဆရာဝနျနဲ့ သခြောတိုငျပငျပွီး သုံးစှဲတာက ပိုကောငျးပါတယျ။
ယောငျးတို့အိမျမှာရော သံလှငျဆီနဲ့ အုနျးဆီ မှာ ဘယျဆီကို ပိုအသုံးမြားလဲ?
Tagged Beauty, benefits, coconut oil, Health, Knowledge, olive oil
ယောင်းတို့အသားအရေနဲ့ အသင့်တော်ဆုံး တိုနာရွေးချယ်နည်း
Posted on August 23, 2017 Author Akari
အသားအရေ ထိန်းသိမ်းတဲ့နေရာမှာ အဓိကကျတဲ့ တိုနာကို မှန်မှန်ကန်ကန် ရွေးချယ်တတ်ဖို့ဆို…
Sun Cream နဲ့ ၀က်ခြံမဖြစ်အောင်ကာကွယ်လို့ရတယ်နော်
Posted on May 18, 2017 May 18, 2017 Author Christina Rosy
Posted on December 5, 2017 Author Khine
ဘာသာစကားအသစ် တတ်တာတော့ ကောင်းတာပေါ့နော်၊ ဒါမယ့် အကုန်အကောင်းချည်းပဲလားဆိုတော့…